न्यूज सञ्जाल: » दसैँमा राष्ट्र बैंकद्वारा पाँच खर्बको नोट नष्ट !
दसैँमा राष्ट्र बैंकद्वारा पाँच खर्बको नोट नष्ट !
न्यूज सञ्जाल २२ आश्विन २०७६, बुधबार १९:१७
काठमाडौं । दशैंमा टीका लगाएर नयाँ नोट दक्षिणा दिने चलन छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षको दशैंमा नयाँ नोट निकाल्छ । तर, नोटहरुको जतन नहुँदा राज्यले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वर्षेनी करोडौं मूल्यका नोटहरु प्रयोगमा आउन नसक्ने गरी बिग्रिन्छन् । यदि तपाईंसँग भएको नोट काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ, तर त्यो नोटको नम्बर प्रष्ट देखिन्छ भने राष्ट्र बैंकबाट साटेर अर्को नलैजान सक्नुहुन्छ । अब तपाई लाग्न सक्छ, हामीसँग लिएको थोत्रा नोट राष्ट्र बैंकले गर्छ चाहिँ के ?
जम्मा पारेर पञ्चिङ मेसिनले समेत प्वाल पारिसके पछि पुनः नोट के-कति परिमाणमा जलाउन लागिएको हो भनेर एकिन गरी मुचुल्का बनाएर राष्ट्र बैंकले ती नोटहरु जलाएर खरानी बनाउने गरेको छ ।